अन्तर्वार्ता Archives - Aajavoli
Lok Awasthi १९ पुष २०७४, बुधबार
पवन आचार्य,महासचिव, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ औषधिमा नाफा धेरै हुन्छ भन्छन् । कति प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ ? नाफा नहुने त व्यवसाय नै हुँदैन । औषधि व्यवसाय भनेको नाफासँगै सेवामूलक पनि हो जस्तो लाग्छ । जे जति बजारमा अपवाह फैलाइएको छ, औषधिमा धेरै मुनाफा लिइरहेका छन् भन्ने सत्य होइन । केही औषधिमा मार्जिन अलि बढी, केहीमा कम हुन्छ । ठ्याक्कै प्रतिशतमा
Lok Awasthi ४ मंसिर २०७४, सोमबार
आगामी प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ललितपुर जिल्लाका पार्टी सभापति एवं निवर्तमान सांसद मदन बहादुर अमात्य पुन चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । मकवानपुर जिल्लामा जन्मिएर ललितपुर जिल्लामा विधार्थी जीवनकालदेखि नै राजनीतिमा होमिएका अमात्य राजनीति भन्दा बढी समाजसेवामा सक्रिए देखिन्छन् । अप्ठेरोमा परेका जो कोहीलाई पनि खुल्ला मनले सहयोग गर्ने उनी स्थानीय स्तरमा निकै रुचाइएका नेता हुन् । ललितपुर ३ नं।
Lok Awasthi २१ चैत्र २०७३, सोमबार April 5, 2017
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेताका रूपमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता के भइरहेको छ ? – वार्ता जारी छ । भन्न लायकको उपलब्धि अहिलेसम्म केही भएको छैन । सरकारले वार्ताका लागि बोलाएका बैठकमा नियमित गइरहेका छौँ । अहिलेसम्मको उपलब्धि यही हो । पछिल्लो वार्ता
Lok Awasthi २२ माघ २०७३, शनिबार
गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गर्नुभएको छ । सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन, पोस्ट ग्य्राजुयट (पिजी)मा वार्षिक पाँच सय सरकारी चिकित्सक उत्पादन, मुटुरोगको निःशुल्क शल्यक्रियालगायत उहाँले जनसरोकारसँग सम्बन्धित धेरै कार्य गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप : स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि
नवीन्द्रराज जोशी, उद्योग मन्त्री काठमाडौँबाट निर्वाचन जितेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ऐन कानुनको परिमार्जन, रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना, निजी क्षेत्रका बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पार्ने एवं १० वर्षभित्र सबै नेपालीलाई रोजगारीजस्ता अभियानका कारण उद्योग क्षेत्रमा उत्साह, सिर्जना गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ– उद्योग क्षेत्रका समसामयिक पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर गरिएको गर्नुभएको कुराकानी । अहिलेसम्मको आफ्नो